Kim ayaa diyaar u ah inuu la hadlo Trump laakiin wuxuu sheegay inuusan tijaabin dulqaadka Waqooyiga Kuuriya – Walaal24 Newss
January 1, 2019	1	By walaal24
Madaxa Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un ayaa Talaadadii sheegay inuu rajeynayo in uu sii wado xajmiga nukliyarka sare ee madaxweyne Donald Trump ilaa 2019, laakiin wuxuu sidoo kale ka digay Washington in aysan tijaabin dulqaadka Waqooyiga Kuuriya ee ciqaab iyo cadaadis.
Xilliga uu ku hadlayo khudbadiisa sannadka cusub, Kim wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo Trump wakhti kasta si uu u soo saaro natiijo “soo dhoweeyay beesha caalamka.” Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in Waqooyiga lagu qasbi doono in uu qaato waddo kale haddii Maraykanku “sii wadayo in uu jebiyo ballanqaadyadiisa iyo in uu si qalad ah u dulqaato dulqaadkeena dadkeena iyada oo si aan toos ahayn looga dalbanayo waxyaabo gaar ah oo ay horay usocdaan cunaqabatayn iyo cadaadis.”
Kim ayaa sidoo kale sheegay in Maraykanku uu sii wadi doono joojinta howsha milatari ee wadajirka ah ee ay la wadaagaan Koonfurta Kuuriyada Koonfureed isla markaana aan milatariga u dirin koonfurta. Waxa kale oo uu sameeyay baaq caalami ah oo ku dhiirri-galinaya wada-shaqayn dhexmarta inter-Korean iyo waxa uu sheegay in waqooyigu uu diyaar u yahay in uu dib u bilaabo hawlgallo ka dhigaya goob ganacsi oo wadajir ah oo ku yaala waqooyiga Kuuriyada Koonfureed ee Kaesong iyo dib u bilaabo Koonfur Kuuriyada Koonfureed ee Dhismaha is Dhaxmarka Dhulka. Midkoodna suurtagal maaha in South Korea laga reebo cunaqabateyn la saaro.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Waqooyiga Kuuriya ay isku dayaysay in ay ku dhex wado Washington iyo Seoul iyada oo saareysa culeys weyn oo ka dhan ah Maraykanka. Pyongyang bilihii la soo dhaafay ayaa ku eedaysay Washington in ay ku fashilantay in ay qaaddo tallaabooyin munaasib ah ka dib markii ay burburisay isku-raranta waqooyiga ee nukliyeerka nukliyeerka iyo joojinta tijaabooyinka gantaalada nukliyeerka iyo mudada fog.
Washington iyo Pyongyang waxay isku dayayaan inay qabtaan shir labaad oo u dhexeeya Trump iyo Kim, oo ku kulmay Singapore bishii June 12-keedii.
“Haddii Maraykanku qaado tallaabooyin caqli-gal ah iyo tallaabooyin ku-saabsan dadaalkeenna hoggaamineed iyo horukac-tirka, markaa (xiriirka US-North Korea) ayaa sii wadi doona si deg deg ah oo si fiican u socda iyada oo loo marayo geedi socodka fulinta (sida) ayaa sheegay in Kim, oo hadalka ku fariistay kursiga maqaarkiisa, isagoo xiranaya muraayad madow ah iyo qalab casri ah.
“Waa meesha aan ku dhicin ee xisbigeenna iyo xukuumadda Jamhuuriyadda iyo shirkaddayda waxay noqon doontaa in labada dal ay ku dhawaaqaan qoraalka wada-xaajoodka 12-ka June … waxay qaadaan tallaabooyin lagu dhisayo nidaam nabadgelyo oo joogtada ah oo xasilooni ah, Peninsula Korean, “ayuu yiri. “Sidaa darteed, waxaan mar hore ku dhawaaqnay gudaha iyo caalamkaba, waxaanay qaadeen tallaabooyin kala duwan oo muujinaya balanqaadkayaga inaanan abuuri doonin hubin ama tijaabin hubka nukliyeerka ah mana isticmaali doono ama aan ku faafin doono.”
Kim Mount, oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan ururada saynisyahanada Mareykanka, ayaa sheegay in Kim uu u muuqdo in uu ku kalsoon yahay heshiis aan hoos u dhicin hub ka dhigis, laakiin wuxuu weli noqon karaa xaddidaad wayn oo khatar ku ah hanjabaadaha Waqooyiga Kuuriya – oo ah astaan ​​dhab ah awood u yeelashada nukliyeerka nukliyeerka ee sii kordhaya ama sii kordhaya. Iyadoo la badalayo, Maraykanka ayaa ku qasbaya inuu soo bandhigo khasaare wayn, oo ay ka mid yihiin ciqaabidda ciqaabta.
“Wadahadalada Mareykanka waa in ay si xushmad leh u qabtaan sanadka cusub si ay u ogaadaan sida ay uga fogaanayaan Kim wuxuu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo dhinaca hubka ah ee arsenal”. “Wadahadal ku saabsan dhimista ama baabi’inta arsenal waxay mar dambe imaaneysaa,” Mount ayaa ku yiri email.
Si kastaba ha ahaatee, kiiska Kim wuxuu keeni karaa dhibaato haddii ay jiraan caddaymo joogta ah oo ay ka helayaan xarumaha nukliyeerka ee nuclear iyo missile sii wadaan. Falanqeeyayaasha gaarka loo leeyahay ayaa ku eedeeyay Waqooyiga Kuuriya in ay sii wadi doonaan horumarka nukliyeerka iyo gantaalaha, iyaga oo ka soo xigtay sawirrada dayax gacmeedka.
“Sanadkii la soo dhaafay, calaamadaha shaqada sii wata ee ka socda arsenal waxa ay walaacsan yihiin, laakiin ma ahan kuwo xambaarsan, sababtoo ah ma jirin wax ballanqaad ah oo lagu joojinayo howlahaas,” ayuu yiri Mount. “Tani ma noqon karto mid runta ah, iyada oo kor u qaadaysa khatarta ah in Aqalka Cad uu dareemo qiyaano halkii laga xishoodi lahaa.”
Khudbada Kim wuxuu sidoo kale tilmaamay sannadka adag ee isbahaysiga Mareykanka iyo Kuuriyada Kuuriya ee wada-shaqayntooda millatari ee soo wajahday cadaadis ka yimid Pyongyang, geeddi-socodkii Seoul ee ka-qaybgelinta dhex-dhexaadinta Korea-da, iyo Washington oo aan awood u lahayn in ay gaarto heshiis ku saabsan kharashka la wadaago joogitaanka ciidamada Maraykanka ee Koonfurta Kuuriya. Waxay noqon doontaa mid muhiim u ah xulafadooda si ay u horumariyaan siyaasad adag sida ay u cadeeyeen in miisaaniyadda wadajirka ah ay timaado madax, Mount ayaa yiri.
Khudbadii, Kim ayaa ku amaanay natiijooyinka hawlaha dibloomaasiyadeed ee Waqooyiga ee 2018, oo uu ku jiro saddexda kulan ee la yeeshay Madaxweynaha South Korea Moon Moon. Kim wuxuu sheegay in heshiis dhex-dhexaad ah oo dhex maray Kuuriyaanka lagu gaaray shirkii ugu dambeeyay ee bishii Sebtembar si loo yareeyo hanjabaadaha caadiga ah ee militariga ayaa ahaa “dhab ahaantii caddayn aan dagaal ahayn.”
Kim wuxuu sidoo kale xoojiyay horumarinta dhaqaalaha Waqooyiga Kuuriya iyo, iyada oo aan loo baahneyn in lagu xoojiyo awooda nukliyeerka iyada oo qayb ka ah qorshayaasha dalka ee kor loogu qaado wax soo saarka korontada.
Khudbada Kim ayaa si dhow u daawaday hoggaamiyeyaasha waqooyiga Kuuriya si caadi ah u adeegsanaya sanadka Cusub ee lagu soo bandhigay sanadii la soo dhaafay oo ay soo bandhigeen himilooyin siyaasadeed oo weyn sannadka soo socda.
Messi 11-sano oo uu hogaanka u hayo gooldhalinta horyaalka
Xildhibaanada Barlamaanka Puntland oo la dhaariyay doorteena Gudoon ku meel gaar ah
Wasiir dowlahii Dastuurka maamulka Puntland oo loo badalay Wasaarada Cadaalada
Dowladda Soomaaliya oo jawaab ka bixisay go’aankii ka soo baxay Dowlada Kenya